एमालेमाथि लाग्यो चोरीको आरोप, माओवादीले खोल्यो फायर ! – GALAXY
एमालेमाथि लाग्यो चोरीको आरोप, माओवादीले खोल्यो फायर !
नेकपा ९एमाले० को विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ लोगो विवादमा परेको छ । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो हँसिया हथौडा लोगोमा प्रयोग गरिएकाले माओवादी कित्ताबाट यसउपर प्रशन उठाइएको हो ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह एमालेले लोगोमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । एमालेले यसअघि वर्गाकार कोठामा सानो साइजको हँसिया हथौडा राखेर त्यसको मुनि युएमएल लेखिएको लोगो प्रयोग गर्दै आएको थियो । हिजो सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पुरानो लोगो परिवर्तन गरी सूर्यभित्र गोलाकार आकारको हँसिया हथौडा राखिएको लोगो पारित गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपाले प्रयोगमा ल्याएको लोगो नै विधान महाधिवेशनले पारित गरेको हो । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा दुवै पार्टीका चुनाव चिन्हलाई मिलाएर लोगो प्रयोगमा ल्याइएकोमा पार्टी विभाजनपछि पनि एमालेले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।
‘जसरी नेपालको झण्डा लोगोमा राख्न पाइँदैन त्यसैगरी अरु पार्टीको चुनाव चिन्ह राखेर लोगो बनाउन मिल्दैन । नेकपा हुँदा कम्प्रोमाइजमा त्यसरी राखिएको हो । अहिले एमालेले त्यसैलाई निरन्तरता दिनेगरी बनाएको लोगोप्रति हाम्रो आपत्ति छ’, माओवादी नेताले भने। यो खबर जनआस्था दैनिकमा छ ।